Dar dargelinta Hiigsiga cusub oo laga hadlay – Radio Muqdisho
Dar dargelinta Hiigsiga cusub oo laga hadlay
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmarke ayaa saaka shir gudoomiyey kulan looga arinsanayey dar dargalinta barnaamijka Higsiga Cusub (New Deal) kaas oo soo bilowday bishii September 2013.
“Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu magaacabay guddi wasiiro, oo kala ah Wasaaradaha Qorshaynta, Amniga, Maaliyadda, Gaashaandhiga, Cadaaladda, Dastuurka iyo Arrimaha Gudaha. Wasaaradahaas ayaa ka shaqayn doona la socodka barnaamijka Higsiga Cusub (New Deal), waxaana hogaanka isku duba ridka deeqaha dalka la keeno yeelanaysa Wasarada Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga”ayuu yiri Wasiir Caynte
Ra’iisul Wasaaraha oo soo xiray kulanka ayaa sheegay in xukuumaddu ay qaaday talaabooyin wax looga qabanayo amniga, ayna wiiqantay awoodii kooxaha nabad diidka, kuwaas oo laga xoreeyey dhul faro badan.
“Waxaan idiin xaqiijinayaa iney iga go’an tahay sii wadida howlihii baaxada lahaa ee socday, sida xoraynta iyo xasilinta dhulka ku harsan gacanta nabad diidka, dhamaystirka maamul u samaynta gobolada dalka. waxaana xusid mudan in hada xukuumadu ku mashquul san tahay sidii loo yagleeli lahaa maamulka laga hirgalinayo gobolada dhexe, waxaa intaa bar bar socda dhiiri galinta shirka dib u hesiisiinta ee ka socda Dhuusamareeb oo hada maraya meel gabo gabo ah” ayuu yiri RW Cumar.
“Waxaa sidoo kale xaqiiq ah iney na sugayso howl badan iyo waqti xadidan, lakiin taageerada aan ka helayno shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka anagoo kaashanayna ayaan ku rajo weynahay iney noo suurta gasho inaan si dhaqso ah u qabano shaqo badan” ayuu yiri RW Cumar oo dhanka kalana xusay inuu balan qaadayo ka dhabaynta qaabkii u shaqayn lahaa Higsiga Cusub.
Kulanka ayaa u jeedkiisu ahaa in Ra’iisul Wasaaraha iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada warbixin looga siiyo wixii ka qabsoomay barnaamijka higsiga cusub mdudadii uu socday, caqabadaha hortaagan, sida uu uga hirgalay gobolada dalka iyo sidii loo dar dar galin lahaa qaybaha uga aadan dhamaystirka aragtida 2016.
Gudoomiyaha La-dagalanka Qaadka Abuukar Cawaale oo lagu soo dhaweeyay Boosaaso (Sawirro)
Madaxweynaha Maamulka Koonfurgalbeed oo dhameystiray Golahiisa Wasiirada “Dhageyso”